Fayyaa Sammuu - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 7:24 15 Fuulbaana 20217:24 15 Fuulbaana 2021
TikTok tajaajilia fayyaa sammuu fayyadamtootaaf ni gargaara jedhu gad dhiisuuf
TikTok tajaajila kennaa jirurratti wanta namoota dhibee fayyaa sammuu qabaniifi ofillee ajjeesuuf yaadu jedhu gargaaru tolchuu beeksise.
...tti maxxanfame 4:02 14 Fuulbaana 20214:02 14 Fuulbaana 2021
Namni rakkoo fayyaa sammuu qabu 'isa maraatee huccuu gate qofaa miti' - Dr Yoonaas
Qorannoo sadarkaa idil-addunyaatti godhameen namoota afur keessaa tokko dhukkuba sammuu qaba, Itoophiyaa keessattis akkanuma jedhu Dr Yoonaas Laaqawu.
...tti maxxanfame 5:34 22 Hagayya 20215:34 22 Hagayya 2021
Attamiin irriba gahaa rafuun danda'amaa?
Erga yeroo dhihootiin as namoonni baayyeen haala irriba isaanii irratti jijjiramni hedduun mudachuu himan. Dhaabbilee tokko tokkoos haala hojjattoonni isaanii itti irriba gahaa ta'e argatan irratti hojjataa jiru.
...tti maxxanfame 4:56 27 Adooleessa 20214:56 27 Adooleessa 2021
Teediin mucaa ganna 12 yoo ta’u, ogeeyyiin Dhaabbata Godaantota Idil-Addunyaa (IOM), fayyaa sammuufi gorsa xiinsammuu wayita gaafatan ‘’miira gammachuutu natti dhaga’ama’’ jedhee yeroo sanatti ibsee ture.
...tti maxxanfame 8:00 1 Waxabajjii 20218:00 1 Waxabajjii 2021
Naa'omii Osaakaa dorgommii tenisii 'French Open' keessaa of baaste
Tapha teenisii dirreen addunyaarra sadarkaa lammeessoo gubbaa kan jirtu Naa'omii Osaakaa, tapha booda miidiyaatti dubbachuu isheetiin booda dorgommii French Open keessaa godaante.
...tti maxxanfame 4:24 31 Caamsaa 20214:24 31 Caamsaa 2021
Lammiin Awustiraaliyaa Samaantaa Azzopaardii kan yakka gowwomsaa baayyee hamaan raawwachuun beekamtu daa’ima hatuun himatamtee Meelboornitti hidhaa seenteetti.
...tti maxxanfame 5:06 26 Caamsaa 20215:06 26 Caamsaa 2021
Pirootiniin Algee qaro-dhabeessi akka argu gargaare
Pirootiniin Alge keessatti argamu namticha guutumaan guutuutti qaroo dhabee ture tokko hanga tokko deebi’ee akka argu gargaare.
...tti maxxanfame 4:27 12 Caamsaa 20214:27 12 Caamsaa 2021
'Jireenya koo ammaa kanatti nan deebi'a jedhee gonkumaa yaadee hin beeku'
Biyyoota addunyaa hunda keessatti weerara Covid-19 qolachuu keessatti narsoonni ga'ee olaanaa gumaachaniiru, garuu hojiinsaanii gaaga'ama lubbuu hamaaf isaan saaxileera. Guyyaa Narsootaa Idil-addunyaa ilaalchisuun BBC'n hojjettoota fayyaa Itaalii wayita weerarichi jalqabu dubbisee ture irra deebiin dubbisuun waan isaan keessa darban irraa iyyaafateera.